दीपकराजको ‘भारत’ का वितरकलाई प्रश्नः ‘हल कब्जा गर्दैमा दर्शक आउँछन् ?’ - Glamorous Icon
२३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १३:३४
Home›GIcon News›दीपकराजको ‘भारत’ का वितरकलाई प्रश्नः ‘हल कब्जा गर्दैमा दर्शक आउँछन् ?’
दीपकराजको ‘भारत’ का वितरकलाई प्रश्नः ‘हल कब्जा गर्दैमा दर्शक आउँछन् ?’
वितरक मनोज राठीले मंगलवार बिहान बलिउड सुपरस्टार सलमान खान अभिनीत फिल्म ‘भारत’ भारतसँगै नेपालमा पनि बुधबार नै प्रदर्शन गर्न पाउनु पर्छ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरे । सोही दिन साँझ अदालतले स्वतन्त्र व्यवसायमाथि हस्तक्षेप नगर्न भन्दै चलचित्र विकास बोर्डलाई ‘भारत’ बुधबार नै नेपाल रिलिज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दियो । यसअघि फिल्म ‘कलंक’ लाई बोर्डले बुधबार रिलिज गर्न रोकेको थियो ।
अदालतले बुधबार नै फिल्म रिलिज गर्न दिन आदेश दिएपछि बोर्डको विदेशी फिल्म पनि नेपाली फिल्मझैं शुक्रवार नै रिलिज गर्नुपर्ने निर्णयमा ठूलो धक्का पुगेको छ । अब, विदेशी फिल्म जुनसुकै दिन नेपालमा प्रदर्शन हुन सक्नेछन् । यसले प्रदर्शनरत नेपाली फिल्मलाई ठूलो मार पर्ने देखिन्छ । ‘भारत’ बुधबार नै नेपालमा प्रदर्शनमा आउँदै तेस्रो हप्तामा प्रदर्शनरत नेपाली फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ लाई ठूलो असर पुगेको छ ।
मल्टीप्लेक्सहरुले ‘भारत’ लाई सर्वाधिक सोज दिँदा ‘जात्रै जात्रा’ न्यून सोजमा खुम्चिएको छ । दर्शकको उपस्थिति राम्रो हुँदा-हुँदै पनि मल्टीप्लेक्सले बलिउड फिल्मका कारण सोज घटाएपछि यसका निर्माता/निर्देशक असन्तुष्ट छन् । हुनत, वर्षौदेखि वितरक र हल सञ्चालकले विदेशी फिल्मलाई काखा र नेपाली फिल्मलाई पाखा गर्दै आइरहेका छन् । विदेशी फिल्म रिलिज हुँदा नेपाली फिल्म सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् ।
‘भारत’ लाई बुधबार नै प्रदर्शन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै वितरक अदालतको शरणमा पुगेपछि फिल्मकर्मीहरु अचम्मित भएका छन् । नेपाली फिल्मलाई सहज रुपमा प्रदर्शनका लागि यति चासो र चिन्ता नलिने वितरकको विदेशी फिल्मप्रति यतिविध्न प्रेम किन ? जवाफ उनीहरुसँगै होला । विदेशी फिल्म नेपालमा प्रदर्शनका लागि वितरकले गर्ने दौडधुप नेपाली फिल्म विदेश प्रदर्शनका लागि गरे कति राम्रो हुने थियो । तर, यहाँ वितरकलाई पैसा कमाउनु छ । नेपाली फिल्मको के चिन्ता !
नेपाली वितरकहरु नेपाली फिल्मसँग अर्को फिल्म जुधाउँदा गर्वको छाति फुलाउँछन् । विदेशी फिल्म नेपाल प्रदर्शनका लागि भने अदालतसम्म पुग्छन् र जितको खुसीयाली मनाउँछन् । के वितरकहरुमा इमान्दारिता तथा नैतिकता मरिसकेको हो ? फिल्मकर्मीहरु फिल्म क्षेत्र वितरकको चंगोलमा फस्दै गएकोमा चिन्तित हुन थालेका छन् । तर, आवाज कसैले उठाउन सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्नुबाहेक ।
हास्यकलाकार दीपकराज गिरी पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न विषयमा ब्यङ्ग्य गरिरहेका हुन्छन् । ‘भारत’ बुधबार नै नेपालमा प्रदर्शन गर्नका लागि वितरक अदालतसम्म पुगेको देखेर उनी पनि अचम्मित भएका रहेछन् । हाल सिन्धुलीमा फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को छायांकनमा व्यस्त उनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर ‘भारत’ नेपाल प्रदर्शन गर्न पाउँदा गर्ववान्वित भएका वितरक र दशैं आएको सम्झिएका हल सञ्चालकप्रति कडा ब्यङ्ग्य गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, अदालतको आदेशले, हलहरूको कृपाले, वितरकहरूको तिकडमले फिल्मले हल त कब्जा गर्ला, तर दर्शक कहाँबाट ल्याउने ? ‘भारत’ प्रदर्शनका लागि अदालतले आदेश दिँदैमा, वितरकले राजनीति गर्दैमा र हल सञ्चालले पर्याप्य हल दिँदैमा दर्शक हल नआउने उनको भनाइको तात्पर्य हो । रोचक कुरा चाहिँ के छ भने ‘भारत’ नेपाल प्रदर्शनका लागि अदालतसम्म पुगेका मनोज राठी ‘छक्का पञ्जा’ सिरिजका वितरक हुन् ।
‘जात्रै जात्रा’ को शो घटेपछि निर्देशकले लेखे- ...
‘शकुन्तला’ टिजर (भिडियो)